Elephant Hit the Train na India RayHaber
HomeỤWAAsia91 IndiaElephant Hit the Train na India
01 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 91 India, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, VIDEO 0
ụgbọ oloko india ji ebu ihe
Elephant Hit the Train Na India. N’India, ụgbọ okporo ígwè na-efe efe na-akụda azụ̀ na-aga n’elu okporo ụzọ. Enyí ahu, merụrụ ahụ nke ọma, wee jiri aka ya gaa n'ọhịa ahụ. Ihe mberede ahụ mere na Jalpaiguri, North Bengal.
Wasgbọ njem ndị njem njem na njem Banarhat-Nagrakata dị na steeti West Bengal, India, nwere oke ihe na-aga n'ụzọ. Kza 27 Ihe ọghọm Septemba mere na 8.30. Vidiyo nke enyí ahụ ụgbọ okporo ígwè ahụ kpataara nnukwu mwute na mgbasa ozi mmekọrịta. Na vidiyo 45-nke abụọ, a hụrụ na enyí ahụ, bụ onye nọ na-ele ndị mmadụ anya na-ele anya, nwere nsogbu siri ike ibili n’elu ala were nwayọ rigo n’ọhịa ahụ. Akụ nke injin ụgbọ njem ahụ mebisịrị emebi, wee kọọ na ọkwọ ụgbọala merụrụ ahụ na njedebe nke ihe mberede ahụ.
Nwanyị na-akụ site na Train na Elazığ Echefuola Ndụ Ya 27 / 03 / 2018 Ihe mberede ahụ mere n'etiti Elazığ na mpaghara Kızılay. Edinilen gaa n'ụlọ ọgwụ ahụ, 2 nne nke ụmụ XMUM X afọ Velvet Steel, na-agbalị ịkwaga ụgbọ okporo ígwè si ọdụ ụgbọ okporo ígwè Station Harput, na-ebu ụgbọ oloko gypsum rutere ụgbọ okporo ígwè ahụ. Ebe ọ bụ na ha amaghị na ha kụrụ nwanyị ahụ na ibu azụ na 53 awa mgbe ọ lọghachitere usoro ahụ, ụgbọ okporo ígwè hụrụ ọhụụ nke nwanyị ahụ. Na nke a, usoro a kpọrọ ndị ọrụ ahụike na ndị uweojii na-ahụ. Ndị ọrụ ahụike si ebe ahụ mepụtara kpebiri na ígwè. Ngalaba nchịkọta ihe nkiri ọjọọ na-arụ ọrụ maka autopsy nke anụ ahụ na-adịghị ndụ nke ígwè
Onye A Na-ata Ahụhụ Site na Nkụzi Na Kayseri 09 / 07 / 2012 Na Kayseri, ụgbọ okporo ígwè kụrụ mmadụ. Onye na-emerụ ahụ nke ọma na mberede ahụ, gbapụrụ n'ụlọ ọgwụ mgbe a gwọchara ya. MA na obodo Melikgazi Bağpınar agbụrụ aha ya, na-apụ ụmụ anụmanụ ka ha rie nri. MA na nsọtụ okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, MA, Kayseri, Sivas, ntụziaka maka nlekọta nke IT na ịkụ ụgbọ okporo ígwè. Onye merụrụ ahụ na mberede ahụ dịka onye merụrụ ahụ, ụlọ ọrụ Kayseri na Ụlọ Ọgwụ Research. Mgbe ọ gwọchara ya, a gbahapụrụ ya. Ụlọ ọrụ ndị ọka iwu ahụ mere nnyocha na nkwupụta ndị mmadụ metụtara mberede ahụ. A tọhapụrụ BT mgbe o kwusịrị okwu ya. Isi: www.haberimport.com
Na Denmark, anụ ọhịa 14 ahụ na-agba ọsọ ụgbọ elu 02 / 10 / 2012 Denmark ọdịda anyanwụ Jutland obodo nke Varde na ụzọ ọpụpụ nke ehi si gbapụta a ugbo dị nso n'ọdụ ụgbọ okporo site elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè see 14 ehi n'iyi. St. Michael Skaarup si uwe ojii ngalaba, ụzọ ugbu a zụọ a akụkụ nke ehi, Gbaa Ọsọ merụọ mgbe ọzọ akụkụ kwuru na n'iyi n'ime a ụfọdụ anya, "Mgbe mberede Varde na ụgbọ okporo ígwè ọrụ n'etiti Skjern obodo e mere maka a ogologo oge. The ụgbọ okporo ígwè see ehi ọnụ na onye nwe na-agụ ha ọnụ, ha na-agbasa n'elu nnukwu ebe akụkọ na ehi n'efu mwepụ usoro were a obere ogologo. Onye nwe ehi na-emetụkwa ya n'ahụ nke ukwuu, iwe were ya. Ma cows na Ancak
Ejiri Ahụhụ Site n'inwe na Van | Na-akụ ụgbọelu 16 / 11 / 2012 Otu nwatakịrị merụrụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ na obodo Bostaniçi nke Van. Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ mmiri TCDD'ye na-eduga n'ọnụ ụzọ Port Kapikoy nke dị na Saray District, ụgbọ okporo ígwè TCDD'ye DE 13.00, nke na-eduzi 53032-hour EU, mgbe ọ na-agafe obodo Bostaniçi, Ruken Kuruç nke 3 na-egwu egwu. Ụmụaka nwere nsogbu, site na ụmụ amaala na Yalim Erez obodo 10 Mba Ụlọ Ọrụ Ahụike Ezinụlọ. Mgbe nke mbụ a kwụsịrị, a na-emeso Ambulance Van Regional Training and Research Hospital RK. E zigara ọtụtụ ndị uweojii na ebe ahụ mgbe ihe mberede ahụ gasịrị, ndị ikwu nwa ahụ ...
Nwanyị na-akụ site na Train na Elazığ Echefuola Ndụ Ya
Onye A Na-ata Ahụhụ Site na Nkụzi Na Kayseri
Na Denmark, anụ ọhịa 14 ahụ na-agba ọsọ ụgbọ elu
Ejiri Ahụhụ Site n'inwe na Van | Na-akụ ụgbọelu
Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ na Ankara merụrụ ahụ na-eto eto
Na Ankara, agadi nwoke ahụ kụrụ ụgbọ ahụ
Echefuola na nkwarụ nkwarụ